UKUGQITYWA KOMGANGATHO WEKHONKRITHI (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - IIPROJEKTHI ZE-DIY
Eyona iiprojekthi Ze-Diy Ukugqitywa koMgangatho weKhonkrithi (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Ukugqitywa koMgangatho weKhonkrithi (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Wamkelekile kumgangatho wethu wekhonkrithi ogqityiweyo kwisikhokelo sokudibanisa kubandakanya ezona ntlobo zidumileyo zekhaya lakho.
Imigangatho yekhonkrithi iyathandwa ngenxa yokuqina kwayo kunye nokuqina. Isitayile, ubuza, ewe ngokwenene. Ngombulelo kwiindidi ezahlukeneyo zokhetho lokugqitywa komgangatho wekhonkrithi esele ikho ngoku, imigangatho yekhonkrithi ngoku zombini ziluhlobo lomgangatho olomeleleyo noluchanekileyo olunokulungela phantse nasiphi na isitayile sokwakha. Elona candelo lililo lokuba nomgangatho wekhonkrithi ekhayeni lakho? Banikezela ngomhlaba onzima nolondolozo oluphantsi onokumelana phantse nantoni na.
Ikhonkrithi kunzima ukubeka i-dent ngaphakathi kunye nokumelana nomonakalo wamachiza. Awunakukhathazeka malunga ne-scuffs okanye ukukrwela. Imiphezulu yekhonkrithi nayo kulula ukuyicoca njengoko inganyangekiyo ngamanzi. Ukuba ukuchitheka kolwelo, kusule nje. Olu xhathiso lwamanzi lwenza ukuba kube lula ukucoceka njengoko, konke okufuneka ukwenze ukucoca umphezulu ngokukhawuleza kukusula, mhlawumbi ngamanzi amancinci. Ulondolozo kuphela oya kuyenza kukuthambisa okanye ukuthengisa kwakhona umgangatho.
Iindidi zekhonkrithi zigqityiwe
Umtshayelo ugqibe ikhonkrithi
Ityuwa igqiba ikhonkrithi
Isanti Qeda ikhonkrithi
Ukugqitywa kweTrowel Concrete
Ukudada Gqiba ikhonkrithi
Ukugqitywa kweTrowel vs Ukugqitywa kweKhonkrithi
Iintsiba zigqiba ikhonkrithi
Ikhonkrithi egqityiweyo egudileyo
Ukugqitywa kweKhonkrithi ephezulu
Ukugqitywa kweKhonkrithi ye-Acid
Ikhonkrithi yokuGqitywa kweEpoxy
Ukujikeleza kugqibe ikhonkrithi
Iindleko zokugqiba ikhonkrithi
Ezona ndawo zidumileyo zePatio ezigqityiweyo
Ukugqitywa kweKhonkrithi kugqityiwe
Uyigqiba njani ividiyo yeKhonkrithi
Ngokuxhomekeka kwintetho yakho, isitayela kunye neemfuno, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kwekhonkrithi ongakhetha ukuyisebenzisa ekhaya lakho.
Umgangatho wekhonkrithi unokufakwa ngaphakathi nangaphandle kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kwekhonkrithi eziqinisekileyo ukuba ziyahambelana nazo naziphi na iimfuno. Ke yeyiphi eyona migangatho ilungileyo yekhonkrithi? Jonga ezona ntlobo zithandwayo zokugqitywa komgangatho wekhonkrithi apha ngezantsi.
Le yenye yeendlela ezilula kunye nezisisiseko zokugqitywa kwekhonkrithi. Ukugqibezela umtshayelo, konke okufunekayo kukuthatha umtshayelo kumphezulu wesamente esandula ukubekwa ngaphambi kokuba wome ngokupheleleyo.
kwisicatshulwa somtshato wakho
Ukutsala umtshayelo ngaphezulu komphezulu owomileyo amagqabi ekhonkrithi ngasemva kwemiqolo emincinci ebunjiweyo. Ezi miqolo zenza umdla onomdla kunye nomtsalane. Ayisiyiyo kuphela inzuzo yomtshayelo ogqityiweyo kumphezulu wekhonkrithi, nangona kunjalo. Olona ncedo lukhulu kukuba iirges ezishiyeke emva kokugqitywa komtshayelo zonyusa ukubambeka komgangatho wekhonkrithi.
Lo mhlaba ulula kodwa osebenzayo ulungile ngaphakathi nangaphandle, kodwa ulunge ngakumbi kwizinto zangaphandle ezinje ngeendlela kunye namanyathelo njengoko ziya kubagcina bangatyibiliki xa bemanzi ngenxa yemvula okanye ikhephu elinyibilikayo.
Le yenye indlela elula yokongeza into enomdla yokuthungwa kumgangatho wekhonkrithi okanye umphezulu.
Xa ugqiba ikhonkrithi, usebenzisa nje ukufafaza ityuwa ngaphezulu kwekonkrithi ngaphambi kokuba yome ngokupheleleyo.
Xa ikhonkrithi yomile, emva koko utshiza amanzi ngaphezulu, de kube inyibilika yetyuwa inyibilike kwaye ikhukuliswe. Okushiyekileyo xa ityuwa ihambileyo yipateni enomdla yemingxunya emincinci kunye ne-indent-ukusuka apho ityiwa ibibekwe khona ngaphambili.
Esi sisiphelo esifanelekileyo sokusetyenziswa kwekhonkrithi yangaphandle kunye nomphezulu njengoko imingxunya kunye nezixhobo zinceda ukudala ukungqubana okuhle.
Ikwabizwa ngokuba yikhonkrithi yokuhlamba isanti, ukugqitywa kwesanti kumgangatho wekhonkrithi kunyangwa ukuba nobume kunye nombala wesanti.
Ukufumana isanti yokugqiba umgangatho wekhonkrithi kufuneka ukhethe umxube wekhonkrithi osebenzisa isanti njengamndilili. Xa umgangatho wekhonkrithi ubekiwe kwaye womile, imichiza iye ishiywe ebusweni ubusuku bonke.
Le khemikhali icotha ukomiswa kwinqanaba eliphezulu lesamente. Ngosuku olulandelayo, umaleko ophezulu unokuhlanjwa, utyhile isanti engezantsi.
Ukugqitywa kwekhonkrithi kweTrowel kufezekiswa ngokusebenzisa iitrowel ukuhambisa umphezulu wekhonkrithi osandula ukufakwa.
Ukufezekisa ukugqitywa komgangatho wekhonkco wekhonkco, kufuneka ubeke ikhonkrithi kwaye-phambi kokuba yome ngokupheleleyo, yiya ngaphaya kwayo ngokulinganisa i-trowel kwaye uyigudise. Itrowel yesandla okanye itrowel yamandla ihanjiswa ngaphezulu komphezulu ukuyigudisa.
Umgangatho wokudada wokudada wokudala wenza indawo edibeneyo, egudileyo, kwaye eqinileyo ngokuqhuba iflethi ngaphezulu kwekhonkrithi ebekiweyo. Kuyafana nokugqitywa kwetrowel ngaphandle kwento yokuba isebenzisa isixhobo esaziwa njenge-float, esiza ngobukhulu obahlukeneyo.
Ukugqitywa kwetrowel kunye nokudada kokugqiba ikhonkrithi kujongeka kufana. Zombini ezi zinto zigqityiweyo zivelisa umphezulu ogudileyo noxineneyo. Umahluko phakathi kokugqitywa kwezi khonkrithi zimbini ulele kwizixhobo abazisebenzisayo.
Ukugqitywa kokudada kulula ukuba kufezekiswe njengoko ukudada kuhlala kunezibambo ezinde, ezolulekayo ezikuvumela ukuba ugudise ngokufanelekileyo ikhonkrithi kwindawo emileyo.
Cinga ixesha elide kwaye kunzima malunga nokusebenzisa i-trowel finish okanye i-float finish concrete kumgangatho ongaphandle okanye kwiindawo ezinabantu abaninzi. Ikhonkrithi egudileyo inokuba mtyibilizi, ngakumbi xa imanzi.
Ukugqibezela iintsiba kumgangatho wekhonkrithi, kuya kufuneka ufake isicelo sokugqibezela iintsiba zorhwebo. Ukugqitywa kweentsiba yindlela elungileyo yokuphefumla ubomi obutsha kumgangatho omdala, ongalinganiyo wekhonkrithi njengoko utyibilikisa ukungafezeki kwaye ukushiya umphezulu ogudileyo.
Ungathenga ngokulula imveliso yokugqibezela iintsiba kwivenkile yehardware kwaye uyisebenzise ngokwakho.
Jonga iilebheli zokugqitywa kweentsiba ozithengileyo, emva koko uthele inani elicetyiswayo lamanzi kwisitya kwaye udibanise ekugqibeleni iintsiba. Qiniseka ukuba awuwugcini ngaphezulu komxube njengoko uza kunciphisa amandla ekhompawundi. Faka isicelo sokugqitywa kweentsiba kumgangatho wakho usebenzisa i-trowel yensimbi kwaye ulinde ukuba yome.
Ukugqitywa kwekhonkrithi okufezekisiweyo kufezekiswa ngohlobo olufanayo njengokugqitywa kwekhonkrithi yomtshayelo, ngaphandle kokuba urhuqe umtshayelo ngaphezulu komphezulu wokoma ikhonkrithi; Apha urhuqa ibrashi phezu kwayo.
Unokwenza iindidi ezahlukeneyo zekhonkrithi ezifakwe ngale ndlela njengoko imijelo eya kushiyeka ngasemva iya kuxhomekeka kuhlobo lwebrashi oyisebenzisayo. Ubungakanani beebrashi bristles kunye nobunzima babo bokuthamba ziya kushiya iintlobo ezahlukeneyo zemigangatho.
Ukugqitywa komgangatho wekhonkrithi lolona hlobo lusisiseko lwekhonkrithi. Zifezekiswa ngokuguda ngokulula kunye nokulinganisa umphezulu wokomisa ikhonkrithi.
Ukupolishwa komgangatho wekhonkrithi ogqityiweyo kufezekiswa ngeendlela zeetawuli okanye zokudada. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ngenene ukufezekisa umphezulu wekhonkrithi egudileyo ngaphandle kokungafezeki kungcono ukusebenzisa kuqala ukudada ngaphezulu komaleko ophezulu wokumisa ikhonkrithi kwaye uyilandele ngokuqhuba itrowel ngaphezulu kwayo ukuqinisekisa ukuba akukho zintsilelo.
Ukufezekisa ukugqitywa kwekhonkrithi yeTop-Cast kuyakufuneka usebenzise indawo egcinwayo yentengiso ebizwa ngokuba yiTop-Cast.
Sebenzisa i-Top-Cast kumgangatho wakho wekhonkrithi kuvelisa umphumo ofanayo kwisiphelo sokudityaniswa njengoko ikhompawundi yenzelwe ukuveza isuntswana lesamente. Ngenxa yoku, i-Top-Cast iyakwazi ukwenza umphezulu wekhonkrithi oza ngemibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa-kuxhomekeke kuhlobo lwe-Top-Cast oyisebenzisayo. Kulula ukuyisebenzisa kwaye uyisebenzise, ​​konke okufuneka ukwenze kukugqiba kwisiphumo osifunayo.
Ukugqitywa kwekhonkrithi yokuhlamba i-asidi kukunika umgangatho wekhonkrithi nge patter enamanzi-kufana nento onokuyifumana kwipere ye-asidi ehlanjwe ijini.
Ukufumana i-asidi yokuhlamba umgangatho wekhonkrithi, kuya kufuneka ufake isicombululo seasidi. Ungathenga ukuhlamba iasidi ngokuthengisa okanye ukudibanisa eyakho. Iasidi ihlamba umsebenzi ngokuphelisa ezinye zeengqimba ezingaphezulu zesamente ezibekiweyo kunye nokuveza ezinye zomdibaniso ongezantsi.
Ukuba uthatha isigqibo sokudibanisa eyakho iasidi yokuhlamba, kufuneka uthenge iasidi ekhuselekileyo kuphuculo lwasekhaya okanye kwivenkile yehardware. Sincoma nokuba yi-muriatic, phosphoric, sulfamic, okanye i-citric acid.
Gcwalisa itoti yokunkcenkceshela ngomxube wamanzi kunye neasidi oyikhethileyo. Unokusebenzisa ilitha enye yamanzi i-60-75 yeenyawo zekhonkrithi. Ngokumalunga nobungakanani beasidi yokuxuba, kuya kufuneka ujonge iilebheli. Ngokuxhomekeke kwi-asidi, kunokucebisa ukuba usebenzise i-asidi ye-10 ukuya kuma-50 ekhulwini.
Nciphisa isisombululo ngaphezu kwekhonkrithi uze uyikhuphe ngomtshayelo. Isisombululo kufuneka senze ukubhobhoza ngaphezulu. Yiyeke ibe malunga nemizuzu eli-10 okanye kude kuyeke ukubhuza.
Hlamba isisombululo seasidi ngesisombululo samanzi kunye nesoda yokubhaka. Sincoma i-1 gallon yamanzi kwibhokisi enye yesoda yokubhaka. Umgangatho mawome.
Ukugqiba ikhonkrithi ye-epoxy, kuya kufuneka ufake i-epoxy coating. Ungathenga isambatho se-epoxy kwimibala eyahlukeneyo kwizixhobo zehardware okanye kwivenkile zokuphucula ikhaya. Olu hlobo lokugqitywa kwekhonkrithi lunika umgangatho wakho ukukhanya okucwebezelayo kwaye uhlala uza ngemibala eqinileyo. Ukugqitywa kwe-epoxy kulunge ngakumbi kumgangatho wekhonkrithi kwiindawo ezigcwele abantu abaninzi ezinje nge igaraji njengoko inqabile kakhulu kukungxala kunye ne-scuffs.
Ukuba ujonge ukukhanyisa indawo, kuya kufuneka ujonge ukugqitywa kwesinyithi. Oku kugqiba ukulinganisa i-sheen kunye nombala wesinyithi kwaye malunga nokuqina kunye nokuxhathisa kwamanzi njengesinyithi uqobo.
Ukuba uceba ukugqiba i-epoxy kumgangatho omtsha wekhonkrithi, sicebisa ukuba ulinde iinyanga ezingama-28 ukuya kwezi-2 ngaphambi kokuba ufake isicelo se-epoxy. Oku kuyakuvumela umgangatho wakho ukuba wome kwaye usete kakuhle. Coca umgangatho uze uwume wome kwangoko.
Ngokwesiqhelo kukho iintlobo ezimbini zokwaleka kwe-epoxy, esekwe kwisinyibilikisi kwaye esekwe emanzini. Isiseko samanzi sihlala sicacile, ke ukuba ufuna ukugcina imbonakalo eqinileyo engwevu yekhonkrithi engenanto kodwa ukongeza ukukhanya, yile nto kufuneka uyisebenzise. Ingubo ye-epoxy esekwe kwisinyibilikisi eza ngemibala eyahlukeneyo, eqinileyo kunye nentsimbi.
Unokufuna ukufaka idyasi ye-epoxy primers kuqala kwaye oku kuyakwenza umanyano olungcono phakathi kwengubo kunye nomgangatho kunye nokwandisa ukuzinza kwemigangatho. Sebenzisa ibrashi yokuqengqeleka ukufaka isiqalo kwaye usiyeke somile malunga neeyure ezili-12 ukuya kwezi-24.
Faka isicelo seebhatyi ezimbini ze-epoxy coating usebenzisa ibrashi ye-roller. Jonga ileyibhile kwivenkile, iya kuhlala ikuxelela ukuba zingaphi iinyawo ezikwere i-epoxy enokuzigubungela. Qinisekisa ukuba uthenga ngokwaneleyo ukogquma umgangatho wakho kabini. Shiya ingubo yokuqala ukuze yome iiyure ezingama-24. Faka isicelo sedyasi yesibini ulinde ezinye iiyure ezingama-24.
Umgangatho wekhonkrithi ojikelezayo ojikelezayo ngulowo ubhalelweyo ukudala ukujikeleza okungaphezulu kwesetyhula. Le pateni inomdla kwaye yahlukile ifezekiswa ngokuhambisa i-trowel ngaphezulu komhlaba owomileyo wekhonkrithi kwipateni ejikelezayo okanye ejikelezayo. I-swirls inokuba nzulu okanye ibe nkulu okanye encinci njengoko ufuna.
Ukuthungwa okungafaniyo kunye neepateni ezifezekisiweyo ngokugqitywa nazo zinezibonelelo ezongeziweyo zokunyusa ukubambeka komphezulu kunye nokunciphisa amathuba okutyibilika kunye nokuwa.
Ikwabizwa ngokuba kukugqitywa kokugqitywa komdibaniso, le yindlela yokugqibezela apho umaleko ophezulu womgangatho wekhonkrithi uhlanjwa ukuze ii-aggregates zibonise.
Ikhonkrithi ngumxube wesamente yasePortland kunye nokudityaniswa, okuhlala kuluhlobo oluthile lwerwala okanye ilitye. Idityaniswe kunye namanzi, isamente iba kukuncamathisela okugubungela ukudityaniswa.
Kwisithuba sekhonkrithi sokudityaniswa kwamanqaku, isilinganiselo esisetyenzisiweyo sikhethelwe umtsalane waso. Isenokuba ngamatye egranite, amaqokobhe olwandle, iglasi enemibala okanye amatye anemibala. Xa ikhonkrithi isetiwe, iphathwa ngemichiza eya kuthi icothise ukuqina kwesamente. Emva kokushiya imichiza ubusuku bonke, amanzi angaphezulu asetyenziselwa ukuhlamba umphezulu kwaye umaleko ophezulu wesamente uyasuswa kwaye izinto ezihlanganisiweyo zishiyiwe zivelisiwe. Oku kubangela iintlobo ezahlukeneyo zeepatheni kunye nokuhanjiswa okubonelela ngombala oqinileyo kodwa ongatyibiliki.
Ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zokugqibela zekhonkrithi ezikhoyo kwimarike, umgangatho wekhonkrithi unokwenziwa ukuba uhambelane phantse naliphi na igumbi ngaphandle kwesimbo.
Njengoko besitshilo, iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa komgangatho wekhonkrithi ziza zinemibala eyahlukeneyo kunye namabala, ke unokukhetha enye ehambelana nembonakalo yegumbi.
Unokukhetha kwakhona ukugqiba okuya kuvumela umgangatho wakho wekhonkrithi ukuba ulingise ezinye izinto zodidi, ezinje ngemabhile okanye isileyiti. Unokufaka ngokulula izinto zokuhombisa ezinje ngoyilo olubunjiweyo ukuqinisekisa ukuba ufumana umgangatho owahlukileyo ngokwenyani.
Iindleko zokugqiba umgangatho wekhonkrithi ziya kuxhomekeka kuhlobo lokugqiba olisebenzisayo kunye nobungakanani bendawo oza kuyigqiba.
Ukugqitywa okulula kwe-polish okanye ibala kuya kukuxabisa malunga ne- $ 2-6 kuyo yonke inyawo lesikwere. Ukugqitywa okucacileyo, njengobumba obunzima, njengokuhlamba i-asidi, kunokubiza i- $ 5-8. Ukugqitywa kokuhombisa, umzekelo omnye olingisa umbala kunye nokuthambeka kwemarble okanye okubandakanya ukubhalwa kweentsimbi kunokubiza malunga ne- $ 7-15.
Ukuba ukugqiba kwakho kufuna ukuba ufake isisombululo esikhethekileyo okanye ikhompawundi, ixabiso liya kuxhomekeka kwiindleko zekhompawundi kunye nendawo oza kuyigubungela.
• Uphawu oluthandwayo lokugqibela lweentsiba yiArdex, ungafumana isikhwama se-10 lb malunga ne- $ 19 kwaye kufanele ukuba igubungele i-16.7 yeenyawo zenyawo ngengxowa nganye.
• Iidyasi ezisekwe emanzini zibiza malunga ne-30-50 yebhakethi ngebhakethi ngelixa i-epoxy enxibe isinyibilikisi iza malunga ne-45 leebhakethi.
• Ilitha ye-Top-Cast inokugubungela i-200-300 yeenyawo zenyawo kwaye i-pail ezintlanu iya kubiza malunga ne-230 yeedola ngokuxhomekeke kuhlobo.
Ngenxa yamandla ekhonkrithi kunye nokuqina, yinto ethandwayo yokusetyenziswa ekwenzeni uyilo lwangaphandle lwangaphandle.
Ikhonkrithi ephathekayo kunye nepatio yongezo oluqinileyo kodwa oluhle kuyo nayiphi na igadi yasekhaya, yenza indawo entle nenethezekile kubanini bamakhaya kunye neendwendwe zabo ukonwabela imozulu elungileyo kunye nomoya omtsha.
Xa sicinga ngemigangatho yekhonkrithi yaphantsi, ezinye zezona zinto zigqityiweyo kunye nezona zithandwayo zigqityiwayo ukusetyenziswa zezo zishiya ipateni ebunjiweyo (ikwabizwa ikhonkrithi enestampu ) kumphezulu ukwandisa ukungqubana komgangatho.
Ngenxa yokuba ipatio yekhonkrithi ingaphandle ihlala ibhenceka kwizinto kwaye ikhonkrithi egudileyo inokuba mtyibilizi xa imanzi. Ukugqitywa okwenziwe ngekhonkrithi okanye okurhabaxa kokona kulungileyo kukukhetha apha kugqityiwe.
Isisombululo esilula kodwa esihle sokwenza indawo entle kodwa ethe tyaba engqinisisiweyo iya kuba kukusebenzisa umtshayelo, ityuwa, okanye ibrashi yokugqiba ikhonkrithi. Ukugqitywa kwekhonkrithi yokujikeleza kuya kulungela ipatio yekhonkrithi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Ewe, ukugqitywa komgangatho wekhonkrithi okushiya umphezulu wepateni kuya kunceda ukwandisa ukungqubana. Ukuba unexesha, unokusebenzisa isanti, iTop-Cast, ukuhlanjwa kweasidi, kunye nokugqitywa kwekhonkrithi kokugqitywa kwiindawo ezixinene ngabantu.
Kungcono ukusebenzisa izinto ezigqityiweyo zekhonkrithi ezishiya indawo egudileyo kwiindawo ezingekho traffic eninzi okanye ezinye izinto ezinje ngeplanti, iziporo, kunye neebhentshi.
Ukugqitywa kwetrowel kunye nokudada kokugqiba ikhonkrithi kuya kubonelela ngendawo entle yokuhlala ukuze ucinge ngokusebenzisa oku ukwenza iibhentshi eziphakanyisiweyo ezijikeleze ipatio yakho.
Ukuchukumisa okuchukumisayo kunye namabala ombala, cinga ngokudala iibhodi okanye iipateni zokuhombisa usebenzisa ikhonkrithi yokugqiba i-epoxy
Ngolwazi oluthe kratya jonga igalari yethu ye imiphezulu yeetafile yekhitshi ekhonkrithi Apha.
utshatile nini melania ixilongo
amagumbi okutyela amahle
ityuwa echibini lomtshato abafoti
yeyiphi isandla esenza umsesane wokuzibandakanya uyaqhubeka
Iringi yokubandakanya iya kweliphi icala